UJames Wan, uWarner Bros. Khupha iTrailer eyoyikisayo 'enobubi'
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	UJames Wan, uWarner Bros. Khupha iTrailer eyoyikisayo 'enobubi'
by Waylon Jordan Julayi 20, 2021
by Waylon Jordan Julayi 20, 2021 2,861 imbono
UJames wan kunye noWarner Bros baye bacotha kakhulu ukukhupha iinkcukacha malunga nefilimu entsha yoyikisayo yomlawuli, Ububi, kodwa ngale ntsasa sinenqwelwana ezalise uxinzelelo esinayo emaphethelweni ezihlalo zethu!
Ngelixa umboniso bhanyabhanya kusafuneka ukhulule isishwankathelo esisemthethweni, kuyabonakala ukuba izakuhlala kumfazi obomi bakhe bujikile xa eqala ukuba nemibono ngothotho lokubulala okwenziwe ngumntu abhekisa kuye njengoGabriel, onokuthi okanye angabinakho ube yinto evela kwixesha lakhe elidlulileyo. Njengoko esiba nokuqiniseka ngakumbi ngemibono yakhe, isoyikiso singena ekhayeni lakhe.
UWarner Bros. ulahle itreyila kuFacebook esithi, "konke ukubulala kumsondeza kuwe."
Ububi ibhalwe ngu-Akela Cooper (Isihogo Festesekwe kwibali lika-Wan no-Ingrid Bisu (Nun). Ifilimu yeenkwenkwezi u-Annabelle WallisAnnabelle), UMaddie Hasson (Ephosakeleyo), NguGeorge Young (Umthamo), UJake Abel (Ngokwemvelo), kunye noJon Lee Brody (Furious 7).
Inqaku liza kuqala kwi-HBO Max nakwiithiyetha ngoSeptemba 10, 2021 njengoWarner Bros. eqhubeka nokwenza isakhiwo esitsha sokukhupha emva kweCovid-19. Babenempumelelo ethile kulo nyaka ngefomathi kubandakanya ukukhutshwa kwe I-Godzilla vs Kong, Isincoko: UMtyholi Undenze Ndayenza, Umfazi omangalisayo '84, Mntundini Kombat, yaye Abo banqwenela ukuba ndifile.
Jonga itreyila Ububi Apha ngezantsi – loo ndawo yesingqengqelo iyodwa iya kwenza ukuba igazi lakho libaleke- kwaye usazise kumagqabantshintshi ukuba uza kubukela xa ihlasela iithiyetha kunye neHBO Max ngoSeptemba!